I-bungalow yangasese eseduze neFremantle - I-Airbnb
I-bungalow yangasese eseduze neFremantle
Palmyra, Western Australia, i-Australia
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Noel
Indawo yami ukuhamba kwemizuzu eyi-10 ukuya eFremantle namabhishi amahle asePort kanye neLeighton kanye nedolobha elimizuzu engama-30 lasePerth.Uhambo olufushane lokufinyelela ezokuthutha zomphakathi kanye nepaki elikhulu ngaphesheya komgwaqo, indawo yayo ethule futhi ekhululekile.Ungakwazi ukuqhela esiphithiphithi se-Fremantle futhi ube nokufinyelela okusheshayo kuyo.
Indawo yayo engaphansi ephephile futhi enobungane, enezitolo ezinkulu kanye nemakethe yabalimi bangeSonto phakathi nokuhamba imizuzu eyi-10. Ilungele izithandani, abathandi bezokuvakasha abangabodwa, nabahambi bebhizinisi.
Ngingumsingathi onobungane futhi ovumelana nezimo, ngijabulela ukuba nengxoxo futhi ngikunike iseluleko mayelana nendawo, ukwabelana ngewayini noma ubhiya.Ngiphinde ngikunike isikhala osidingayo uma ufuna ubumfihlo bakho. Isikhala siyi-bungalow encane ngemuva kwendlu yami, kulula ukuyifinyelela futhi unobumfihlo bakho.
Ngihlala endaweni ethule, ephephile, lapho wonke umuntu aziwa khona futhi enobungane kakhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Palmyra namaphethelo